मानव सेक्सलाई रोबोटले उछिन्ने ! – Everest Dainik – News from Nepal
मानव सेक्सलाई रोबोटले उछिन्ने !
२०७५, २९ असार शुक्रबार
यति बेला बजारमा सेक्स रोबोटको प्रयोग निकै बढिको पाइएको छ । युरोपेली मुलुकमा त यसको प्रयोग झनै बढेको छ । सेक्स रोबोटले मानिसको चरम सेक्स चाहानलाई केहि हदसम्म रोक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
केही समयअधिदेखि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन थालेका सेक्स डलहरु अनेक किसिमका हुन्छन् । यति मात्र नभई यस्ता सेक्स डलहरुसँग ५० किसिमका सेक्स गर्ने तरिका हुन्छन् । साथै तीनले प्रयोगकर्तासँग कुराकानी पनि गर्न सकछन् । लण्डनका वैज्ञानिकहरुको एक अध्यानले बढ्दो सेक्स डलको प्रयोगले प्रयोगकर्तामा ठुलो सम्स्या निमत्याउन सक्ने बताएको छ ।
रोबोटसँग हाम्रो लैंगिक भविष्य भन्ने शीर्षकमा आधारित उक्त रिपोर्टले बच्चा जस्तो डिजाइनमा सजिएका सेक्स डलहरुको व्यापार बन्द हुनु पर्ने बताएको छ । यस्ता खालका सेक्स रोबोटले बच्चाहरुमा गम्भीरअसर पर्न जाने उक्त रिपोर्टको दाबी छ ।
सेक्स रोबोट मनिसले नै निमार्ण गरेको हो । यसले यौन सम्बन्धी हुने कयौं अप्रीय घटनाहरुको न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्छ । तर यस्ता खालका सेक्स डलका कारणले मानिसहरुमा एक्लोपना पैदा हुने विज्ञहरुको चेतावनी छ ।
छिट्टै रोबोट सेक्सले मानव सेक्सलाई उछिन्ने विज्ञहरुको पूर्वानुमान छ । तर केही सेक्स रोबोट विज्ञहरुले भने रोबोटसँगको सेक्स कुलतको रुपमा विकशित हुनसक्ने र यसले मानिस मानिस बीच हुने सम्भोगलाई नै प्रतिस्थापन गर्नसक्ने जोखिम देखेका छन् ।
साथै रोबोट विज्ञका अनुसार रोबोट सेक्स लतको रुपमा विकास हुने जोखिम किन पनि छ भने सेक्सका लागि रोबोट जतिबेला पनि तयार हुनेछ । कुनैपनि बेला सेक्सका लागि इन्कार नगर्ने भएपछि सेक्सको लत स्वतः बस्नेछ । त्यसकारण विज्ञहरुले यसले मानव सेक्सलाई उछिन्ने अनुमान लगाएका छन् ।
साथै रोबोटसँगको निरन्तर सेक्सले मानिसलाई चरम आनन्दको अनुभुति दिलाउनेछ र ऊ आफ्नो मानव पार्टनरसँग भन्दा रोबोटसँगै सहवासका लागि अघि सर्नेछ । एजेन्सीको सहयोगमा
ट्याग्स: Human Sex, Roborto
भारत झापा–सिलगुडी पाइपलाइन विस्तार गर्न सहमत
बलिउड अभिनेत्री शबाना आजमी कार दुर्घटनामा घाइते
प्रधानमन्त्री ओली डायलाइसिस गर्दै, काममा खटिँदै
म्युजिक नेपालद्वारा आफूले सिर्जना वा उत्पादन नगरेका ५० हजार गीतको ‘कपिराइट’ कब्जा
मौसममा आजदेखि क्रमिक सुधार
मेडिकल कलेजको बदमाशीः रातारात सहमति, उपलब्धि शून्य
कस्तो बित्दै छ तपाइको आजको दिन ? हेर्नुस् यस्तो भन्छ राशिफल
रोहित–शिखरले अष्ट्रेलियासँगकाे ‘निर्णायक म्याच’ गुमाउनसक्ने